जाडोमा छालाको स्याहार यसरि गरौं
प्रकाशित मिति : : बिहिबार, माघ ११, २०७४
जाडो मौसम छालाको लागि अनुकुल मानिदैन । यसवेला वाहिरी वातारण सुख्खा हुन्छ । यसले छालामा सोझो असर गर्छ । अझ काठमाडौं वा शहरी क्षेत्रमा धुलो-धूँवाले छालालाई थप नोक्सान पुर्‍याउँछ । वाहिरी चिसो र भित्री ताताको सन्तुलन नमिल्दा पनि त्यसको प्रभाव छालामा देखिन्छ । त्यसैले जाडो याममा छालाको सौन्दर्य कायम राख्न बढी सजग हुनुपर्छ । छालालाई कसरी मुलायम, चम्किलो, रसिलो, स्वस्थ्य राख्ने भन्ने कुरा जान्नुपर्छ ।
के हुन्छ जाडोमा ?
जाडोमा खासगरी छाला रुखो हुने, फुट्ने, सुख्खा हुने समस्या हुन्छ ।
त्यस्तै छाला चिलाउनेे, हात गोडा फुट्ने, छालाको पत्र निस्कने, अनुहारमा चाया-पोतो आउने तथा बढ्ने र रुखो हुने समस्या हुन्छ । अर्कोतिर टाउकोमा पनि चाया पर्ने गर्दछ ।
विशेषगरी जाडोमा बढी देखिने रोगहरुमा एक्जिमा र डर्माडाइटिस, पोलीमफिर्क लाईट इरप्सन, पोरोसिस, पर्नासिस(हात खुट्टाका औला सुन्निएर निलो हुने ) आदी पर्दछन् ।
जाडोमा छाला सुख्खा किन हुन्छ ?
जाडो मौसममा वायुको आद्रता कम हुने गर्छ । जसका कारण हावामा पानीको मात्रा कम हुन्छ । त्यस्तै, जाडोमा पानीको सेवन कम हुने तथा शरीरबाट पसिना कम आउने भएकोले पनि जाडोमा छाला सुख्खा हुने गर्छ ।
अब कसरी छालाको चमक जोगाउने त ?
हामीले भनिहाल्यौ, जाडोमा वायुको आद्रता कम हुन्छ । यसले छालामा आवश्यक पानीको मात्रा पुग्दैन । त्यसले गर्दा छाला रुखो, सुख्खा देखिन्छ । यसबाहेक छालाको पत्र उप्किने, चिलाउने, सुन्निने, दागहरु आउने समस्या हुन्छ । यसबाट बच्नका लागि केहि घरेलु उपचार विधी अपनाउन सकिन्छ ।
१. पर्याप्त मात्रामा पानी सेवन गरौं ।
२. अनुहारमा तातो पानीको बाफ लिने गरौं । यसले बन्द भएको रोमछिद्र खुल्छ ।
३. हातले हल्का मसाज गरौं । यसले अनुहारमा रक्तसंचार हुन्छ र छालाको सौन्दर्य कायम राख्छ ।
४. साबुनले अनुहार धुने नगरौं । संभव भएसम्म नन ड्राई क्लिन्जर फेसवास प्रयोग गरौं ।
५. मोश्चराइजिङ क्रिम पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । यद्यपी आफ्नो छालाको प्रकृति अनुसार त्यसको छनौट गरौं ।
६. बाहिर हिँड्नुअघि सन प्रोटेक्सन क्रिम लगाउनुपर्छ । धुलो र धूँवाबाट छालालाई जोगाउन माक्स, स्कार्फ आदिको प्रयोग गरौं ।
७. छालालाई स्वस्थ्य राख्ने भन्दा हामी छालाको वाहिरी स्यहारमा मात्र ध्यान दिन्छौ । यद्यपी यसमा आन्तरिक रुपले नै हामी सेचत हुनुपर्छ । त्यसका लागि खानपानमा खास ध्यान दिनुपर्छ । स्वस्थ्य र सन्तुलित खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ ।
८ं मौसमी फलफूल सेवन गरौं, जसले जाडोमा छालाको सौन्दर्य कायम राख्छ ।
९. प्राणायाम जस्ता विधीले पनि शरीरमा पर्याप्त अक्सिजन पुग्छ । यसले छालालाई स्वास्थ्य राख्न सघाउँछ ।